ခြေထောက် မသန်စွမ်းသူများအတွက် သတင်းကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » ခြေထောက် မသန်စွမ်းသူများအတွက် သတင်းကောင်း
ခြေထောက် မသန်စွမ်းသူများအတွက် သတင်းကောင်း
Posted by ဘဲဥ on Jun 9, 2012 in Ideas & Plans | 8 comments
အားလုံးသော စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအတွက် သတင်းစကားလေးပါးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ခြေထောက်တစ်ဖက်(သို့) နှစ်ဖက်စလုံး မသန်စွမ်းသူတွေအားလုံး ခွဲစိတ်ကုသပေးနေပြီးတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုအကြောင်းပါ။ မွေးရာပါ မသန်စွမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် အာရုံကြောကြောင့် မသန်စွမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအကြောင်း မျိုးနဲ့ပဲ ဖြစ်ပါစေ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ကုသပေးနေတဲ့ ဆေးရုံလေးပါ။ မယုံကြည်သူများ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်၊ လိပ်စာလေးရော ပေးထားပါတယ်နော်။
အဲ့ဒီဆေးခန်းလေးကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြင်းမူမြို့နယ် ၊ ခွက်ခွင်းကျေးရွာမှာတည်ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီဆေးရုံလေးကို ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာ အရှင်ဥာဏိသရ ရဲ့ လမ်းညွှန်ပံပိုးမူနဲ့ ၊ တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ်ဍာဂါရိက ဘဒ္ဒန္တဝံသာပါလာလင်္ကာရ ဆရာတော်နှင့် တိပိဋကဓရ ဘဒ္ဒန္တပညာသိရီလင်္ကာရ ဆရာတော်တို့ နှစ်ပါးက ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပြီးလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီဆေးရုံလေးမှာ (၁၆) ကုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ဆေးရုံလေးဖြစ်သော်လည်း ဆေးရုံ၏ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဂုဏ်သတင်းကြောင့် ဒေသအနှံ့မှ လူနာပေါင်း (၁၂၀) ခန့် နေ့စဉ် လက်ခံကုသပေးနေပါတယ်။ ဆေးရုံဝင်းထဲမှာတင်ပဲ ညအိပ်စောင့်ပြီး ကုသနေတဲ့လူတွေလည်း အများအပြားရှိပါတယ်။ ထူးခြားချက်တစ်ခုက အဲ့ဒီဆေးရုံမှာ Dr ထွန်းထွန်းဦးတစ်ယောက်တည်းက ဒိုင်ခံခွဲစိတ်ကုသပေးနေတာပါပဲ။ သူကလည်း မခွဲစိတ်မှီ သေချာစစ်ဆေးပြီး မှ ကုသပေးပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသပြီးရင်လည်း ပျောက်ကင်းသွားတဲ့လူတွေက ရာနှုန်းပြည့်ပါပဲဗျာ ။ တစ်ကယ်တော်တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ပညာ နဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ထားက အရမ်းပဲ လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။
အဲ့ဒီဆေးရုံလေးမှာ အဓိက ကုသပေးနေတာတွေကတော့ ခွဲစိတ်၊ အရိုးအကြော၊ သားဖွားမီးယပ်၊ ဖျားနာ၊ မွေးရာပါ ခြေမသန်စွမ်း စတဲ့ရောဂါများဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဆေးရုံလေးကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းချင်ရင် အောက်ဖော်ပြပါနေရာတွေမှာ လှူဒါန်းလို့ရပါတယ်။
(၁) ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝံသာပါလာ လင်္ကာရ
မင်းကွန်း တိပိဋက နိကာယကျောင်းတိုက် ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်။
ဖုန်း – 09.6463294 ၊ 09.5140283
(၂) ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာသီရိ လင်္ကာရ
မင်းကွန်းတိပိဋကကျောင်းတော် ၊ အမှတ်(၁၂)၊ စကားဝါလမ်း ၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊
ဖုန်း – 09.5114224
Abbot, Bhammaw Myay Zin School , 4708 , Spatz Ave.
Fort Wayne, IN – 46806 , U.S.A
(၄) Rachel Myint Thein
460, Irvington Street, Daly City, CA-94014, U.S.A
Email : 22khant@gmail.com
Moh Moh Diamond & Jewellwry . အမှတ်(၅၆) မဟာသုခလမ်း၊ ကျီတော်ရပ်ကွက်၊
ဖုန်း – 09-5167410 ၊ 09.9000519
(၆) တိပိဋက နိကာယ သာသနာပြုအဖွဲ့ရုံး
အမှတ်(12) စကားဝါလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – 01.222277 ၊ 01.222278 ၊ 01.222279
ဒါက ဆေးရုံလေးမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဆရာတော်ဦးဝံသပါလ
ဒါကတော့ ခွက်ခွင်းစံပြကျေးရွာ အဝင်မုတ်ဦးပါ
ပုံတွေကတော့ နည်းနည်းဝါးသွားတယ် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့
တစုတပေါင်းတည်း ဖြစ်သွားအောင် ကိုထူးဆန်းရဲ့ ဘယ်မှာ ဘာယူလာပြီး လှူရမလဲဆိုတဲ့ ပိုစ့်မှာလည်း အဲဒီလိပ်စာ သွားရေးပေးထားရင်ကောင်းမယ်။
သေချာမှတ်သွားပါတယ်ဗျို့ ။ ကိုယ့်ဝန်းကျင် က ခြေထောက်မသန်စွမ်းနေတဲ့သူတွေ ကုသမှုခံယူချင်ခဲ့ရင် ပြန်လမ်းညွှန်လို့ ရအောင် ။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဘဲဥရေ
Aunty Shoon says:
ဒီသတင်းကိုဖတ်မိတော့ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။အန်တီက ခါးရိုးထိခိုက်ထားလို့ခြေထောက်မသန်ဖြစ်နေတာပါ။ချက်ချင်းကိုပြေးကုလိုက်ချင်ပါတယ်။ အဲ့ဆေးရုံကိုအန်တီရောဂါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှမ်းမေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါ့လား။ဒီပိုစ့် ကိုတင်ပေးတဲ့ ဘဲဥကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
အန်တီရေ့ ကျနော်ခရီးထွက်နေရလို့ အန်တီ့ ကွန်မန့်လေးကို အကြောင်းမပြန်ဖြစ်တာ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ။
အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ လိပ်စာတွေမှာ စုံစမ်းလို့ရနိုင်ပါတယ်
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝံသာပါလာ လင်္ကာရ ဦးစီးတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း မြင်းမူမြို့နယ် ခွက်ခွင်းကျေးရွာ မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံ ဆိုရင် သိပါတယ်ခင်ဗျ ၊ အန်တီရဲ့ ရောဂါဝေဒနာ အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် အန်တီရေ့။
မောင်ဘဲဥတော့ … သဂျီးနဲ့တွေ့တော့မယ် .. အဟိ … ။
ခြေထောက်မသန်ပေမယ့် စွမ်းသူများလို့ ပြောင်းပါဟဲ့ ……. ။
တော်ကြာ နှိပ်ပြီးခေါ်တယ်ဆိုပြီး …… ပွိုင့်တွေ ဖြတ်နေဦးမယ် .. ဟိဟိ
ထုံးဘဲဥရေ …. ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး ၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ထမ်းလုပ်ပြီး.. ငွေမျက်နှာပဲ ကြည့်တဲ့လူတွေ ပေါလာတဲ့ခေတ်မှာ .. ဒီလို မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေ လူတွေလည်း ရှိသေးတာ … သာဓုခေါ်စရာကောင်းပါတယ် …. ။ ဒီလို ဦးဆောင်သူတွေ ၊ သူနာပြုတွေ ၊ ဆရာဝန်မျိုးတွေ၊ စာနာထောက်ထားကြသူတွေ များစွာပေါ်ထွက်လာပါစေလို့ …. ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ် ။
အာပျိုဂျီး ရော အဲ့ဒီကို မသွားချင်ဘူးလားဟင်
ဘဲဥလေးနဲ့ တူတူသွားကြမယ်လေ လိုက်မယ်မို့လား ဟီးးးး
အာပျိုဂျီး နဲ့ ဘဲဥလေးနဲ့ ဟီး ဟီး
အားလုံး အားလုံး ဒီသတင်းလေးကို ပြန်ဖွပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်
အထူးသတင်းကောင်လေးပါပဲ။ ပုံလေးတွေက ၀ါးနေတာ တစ်ခုပါပဲ။ အတွေ့များတာကတော့ မသန်ပေမယ့် စွမ်းပါတယ်ဆိုသလိုပေါ့။ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးပါတယ်။